July 10, 2013 – democracy for burma
On July 10, 2013 July 10, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊မြို့တော်ကိုလံဘိုရှိ၊အိန­္ဒိယသံရုံးရှေ့တွင် ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာအား အစွန်းရောက်များမှ ဗုံးခွဲအကြမ်းဖက်မှုအား ကန့်ကွက်ရှုံ့ချသောအားဖြင့်၊ သီရိလင်္ကာသမ္မတ၏ အကြံပေးသြ၀ါဒစရိယ Buddhist Culture Center (BCC)ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် ပါလီမန်ဆရာတော် Rev-Somasara Thero မှဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အမျိုးဘာသာ၊သာသနာတော်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ Bodhi Bala Sena (BBS) တို့နှင့်အတူ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်အသီးသီတွင် ပညာသင်ယူနေကြသည့် မြန်မာပညာတော်သင်ရဟန်းတော်များနှင့်၊ သီရိလင်္ကာ၊ကမ္ဗောဒီးယား၊ထိုင်း၊နီပေါ၊ဗီယက်န­ာမ်၊ဂျပန်၊တရုတ်၊ကိုရီးယား စသည့်နိုင်ငံများမှ သံဃာတော်များ၊သီလရှင်များသည် ၄င်းမြေမြတ်မဟာတွင် အကြမ်းဖက်မှုအား ရှုံ့ချသောအားဖြင့် မေတ္တာတော်ပို့သ၍ ဆန္ဒပြုတော်မူကြပါသည်။
Mae Tao clinic caught in land dispute
On July 10, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
A legal dispute is underway betweenafoundation that supports Mae Tao clinic in Thailand’s Tak, founded and run by Magsaysay laureate Dr Cynthia Maung, andamonk who sold the land plot, which is now home toafield hospital andaschool.
Well-known Thai social critic Sulak Sivaraksa, founder of the Metta Thammarak Foundation, has called on foundation members to filealawsuit against Phra Kittisak Kittisophano, who allegedly sold the three-quarter-rai plot of land for Bt2.5 million to Pol Lt-Col Cholthep Maichai,asenior policeman based in Fang. The sale, he said, was in violation of the foundation’s objectives.
A Thai activist, Pipob Udomittipong, said fraud was being considered against Phra Kittisak, because he sold the land plots without authorisation; andacivil lawsuit to invalidate the sale of the land plots, which were sold to the policeman, despite him being the innocent party.
Chalwal Punyapan,aformer foundation member, said the land plots housedahospital andaschool, and the sale of the land would affect operations of both services -provided largely to Myanmar refugees and children born to immigrants based or working in Tak province.
Sulak said earlier that Cynthia would not be qualified to lodgealawsuit herself, as she was notaThai national, and Mae Tao clinic was not registered asalegal entity. He criticised the monk, now chair of the foundation, saying that he placed more importance over money than on friendship, and seemed to have forgotten the assistance he had received in the past.
Cholthep claimed that he actually bought the plots for Bt2.7 million, from Phra Kittisak, and quoted him as claiming that Mae Tao clinic would be relocated away. A condition in the purchase of the land says Cholthep could not enter the plots or make profits off them before five years, after the sale was made mid last year.
The Thai policeman said Phra Kittisak told him the money would be spent on the charity’s affairs and building more facilities for the Mae Tao clinic when they are built atanew site. Cholthep said he had called the monk but could not reach him.
The policeman said he did not have any business plan to make use of the land plots, and said he, as an innocent buyer, was ready to clarify if queried. He said the seller of the lands must be held responsible, as the land plots were sold in violation of the Metta Thammarak Foundation, thus rendering the sale invalid under the Civil Code.
Chalwal said he had not learned of any illegal activities, including smuggling of illegal immigrants into Thailand, as alleged by Phra Kittisak, throughout more thanadecade of the foundation’s or the clinic’s operation. He said Mae Tao clinic officials had tried to convince the monk to hand over ownership to Suwannimit Foundation, which is allied to the Metta Thammarak Foundation and now oversees the Mae Tao clinic, but the monk kept turning them down.
UNFC နှငျ့ အစိုးရကိုယျစားလှယျတို့ တှဆေုံ့ကွဆှေးနှေးကွမညျ
imna mon news
ခတ်တာနနျး – ပွညျတောငျစုအစိုးရ ငွိမျးခမျြးရေး ဖျောဆောငျရေးလုပျငနျးကျောမတီ (UPWC) ၏ နညျးပညာ အထောကျအကူပွု အဖှဲ့ (Techical Team) နှငျ့ ညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဖကျဒရယျကောငျစီ (UNFC) ၏ နညျးပညာ အထောကျအကူပွု အဖှဲ့တို့ ယခုလ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ နိုငျငံရေးဆိုငျရာ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးနိုငျရေးအတှကျ အကွိုတှဆေုံ့ဆှေးနှေးရနျရှိကွောငျး UNFC အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး နိုငျဟံသာက ပွောသညျ။
နိုငျဟံသာက “ အဓိက ဒီမှာဆှေးနှေးဖွဈမှာကတော့ ငွိမျးခမျြးရေး တညျဆောကျတဲ့နရောမှာရော နိုငျငံရေးဆှေးနှေးတဲ့အခါမှာပါ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှမှေုလမျးပွမွပေုံကို နှဈဖကျနားလညျသဘောတူကွဖို့ အတှကျကို ဆှေးနှေးသှားမှာပါ၊ အရေးကွီးတာက အမွငျမတူကွဘူးဆိုရငျ ရရှေညျသှားဖို့ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျဘူး” ဟူ ပွောသညျ။
နိုငျငံရေးဆိုငျရာ နှဈဖကျညှိနှိုငျးဆှေးနှေးပှဲအတှငျး ပွညျတှငျးပွညျပမှ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသူမြား၊ ကွားဝငျပုဂ်ဂိုလျမြားနှငျ့၊ ဆှေးနှေးပှဲလုပျမညျ့ အစီအစဉျမြားကို ယခုအကွိုဆှေးနှေးပှဲတှငျ ထညျ့သှငျးညှိနှိုငျးသှားမညျဖွဈကွောငျး နိုငျဟံသာက ဆကျပွောသညျ။
ယငျးအကွိုဆှေးနှေးပှဲတှငျ ပွညျထောငျစုအစိုးရ၏ ငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျရာမူ (၈)ခကျြ နှငျ့ UNFC ၏ ငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျရာ နိုငျငံရေးလုပျငနျးစဉျ ( ၆ ) ခကျြ တို့ကိုလညျး ဆှေးနှေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
နိုငျဟံသာက “ ကနြျောတို့အနနေဲ့ လကျနကျစှနျ့ပွီး ရှေးကောကျပှဲ ဝငျဖို့ဆိုတာ လုံးဝမဖွဈနိုငျဘူး၊ အစိုးရက တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှကေို လကျနကျစှနျ့ပွီး သာမနျပွညျသူလူထုတှလေို နစေခေငျြတယျ၊ ကနြျောတို့က သူတို့ခမြှတျတဲ့စညျးမဉျြးဥပဒတှေကေို လကျမခံနိုငျတဲ့အတှကျ အခုလို တျောလှနျနရေတာပါ၊ ဒါကွောငျ့ နှဈဖကျနားလညျမှုရဖို့အတှကျ နညျးလမျးရှာသှားကွမှာပါ” ဟု ပွောသညျ။
ပွညျထောငျစုအစိုးရ၏ ငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျရာမူဘောငျမြားထဲမှ ပါတီထူထောငျ၍ ရှေးကောကျပှဲဝငျရနျကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ မိမိတို့ UNFC အနနှေငျ့ လကျမခံနိုငျကွောငျး၊ လှတျတျောပွငျပ၌သာ ပွဿနာကို ဖွရှေငျးလိုကွောငျး၊ ပါတီထူထောငျ၍ ရှေးကောကျပှဲဝငျရနျအတှကျလညျး လုပျဆောငျမညျမဟုတျကွောငျး နိုငျဟံသာက ဆကျပွောသညျ။
မွနျမာစာနယျဇငျသမဂ်ဂ ဒု-ဥက်ကဌ ဦးဇငျလငျးက “ ပွညျထောငျစုအစိုးရရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျရာမူ နဲ့ UNFC ရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးဖျောဆောငျမှုလမျးပွမွပေုံက အခကျြတှဟော အရမျးကို ကှာဟခကျြတှမြေားနတေယျ၊ ဒါကို ညှိဖို့ ဆိုတာ အခြိနျအတျောလေးကို ယူရပါမယျ” ဟု ပွောသညျ။
ပွညျထောငျစုအစိုးရ၏မူဘောငျမြားအနကျ လကျနကျစှနျ့လှတျ၍ ပါတီထူထောငျရေးကိစ်စ၊ ရှေးကောကျပှဲဝငျရေးကိစ်စ၊ ဖှဲ့စညျးပုံကိုလှတျတျောအတှငျးပွငျဆငျရေးကိစ်စမြား ပါဝငျပွီး၊ UNFC ၏ လမျးပွမွပေုံတှငျ တိုငျးရငျးသားအားလုံးပါဝငျ၍ လူမှုအခွပွေု CBO အဖှဲ့မြား၊ အမြိုးသမီးအဖှဲ့မြားနှငျ့ လူငယျအဖှဲ့မြားအားလုံး ပါဝငျသညျ့ ညီလာခံတရပျလုပျဆောငျရနျနှငျ့၊ လှတျတျောပွငျပတှငျသာ အခွခေံဥပဒဖှေဲ့စညျးပုံ ပွနျလညျပွငျဆငျရေးမြားပါဝငျကွောငျးဖွဈသညျ့အတှကျ ယငျးလမျးပွမွပေုံ ၂ ခုအတှကျ သဘောတူညီမှုရရှိရနျ ခကျခဲကွောငျး ဦဇငျလငျးက သုံးသပျသညျ။
ယခုအကွိုတှဆေုံ့မှုတှငျ UNFC ၏ နညျးပညာအထောကျအကူပွူအဖှဲ့ကို ဗဒိုမနျးမနျးမှ ဦးဆောငျမညျ ဖွဈကွောငျး၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရငွိမျးခမျြးရေး ဖျောဆောငျရေး လုပျငနျးကျောမတီ UPWC ၏ နညျးပညာအထောကျအကူအပွုအဖှဲ့အား ဦးလှမောငျရှမှေ ဦးဆောငျပွီး အဖှဲ့တဈဖှဲ့တှငျ ခွောကျဦးခနျ့ ပါဝငျမညျဖွဈပွီး ယခုလ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ ထိုငျးနိုငျငံတဈနရော၌ တှဆေုံ့ကွမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Col Zaw Lin Aung is Magway Region Minister for Security and Border Affairs and Col Zaw Myo Tin for Kayah State
(Order No. 16/2013)
12th Waning of Nayon, 1375 ME
(5th July, 2013)
Appointment of Kayah State Minister for Security and Border Affairs
Kayah State Minister for Security and Border Affairs Col Tin Soe has been reassigned to discharge his previous military duties, and Col Zaw Myo Tin from the Regional Control Command (Loikaw) has been appointed as Kayah State Minister for Security and Border Affairs in accord with Section 262 (a) (ii), (b) and (e) and (f) and Section 264 (c) of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, Section 19 (c) and Section 82 (c) of the Union Government Law and Section 8 (a) (ii), (b), (f) and (g) and Section 56 (a) of the Region or State Government Law.
(Order No. 17/2013)
(5 July, 2013)
Appointment of Magway Region Minister for Security and Border Affairs
Magway Region Minister for Security and Border Affairs Col Arnt Zaw has been reassigned to discharge his previous military duties, and Col Zaw Lin Aung of No.88 Light Infantry Division has been appointed as Magway Region Minister for Security and Border Affairs in accord with Section 262 (a) (ii), (b) and (e) and (f) and Section 264 (c) of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, Section 19 (c) and Section 82 (c) of the Union Government Law and Section 8 (a) (ii), (b), (f) and (g) and Section 56 (a) of the Region or State Government Law.
Ministry of Foreign Affairs briefs diplomats on current Situation Rakhine State
Myanmar’s Ministry of Foreign Affairs heldapress conference in Yangon on Tuesday to address the current situation in the western state of Rakhine.
Foreign ambassadors, diplomats, officials from United Nations and government deputy ministers also attended the conference.
“On July7Vice-President Sai Mauk Kham, Union Ministers and diplomats toured Rakhine State. There they visited Maungtaw, Meybon and Pauktaw regions to witness rehabilitation works as well as construction of long shelters, to end communal violence and continue assistance in health and education sectors,” explained Thant Kyaw, Deputy Minister for Foreign Affairs.
Union Minister Aye Myint also briefed the conference on the supply and distribution of paddy seeds and fertilisers and the conducting of agricultural training courses, adding that fishing boats and various kinds of fishing nets have also been distributed to fishermen.
Concerning education, Minister Aye Myint said that the Ministry of Education is cooperating with UN agencies to build schools.
“In Rakhine State, 33 schools are to be constructed. Among them, 26 will be built by the UNICEF and the rest by the Ministry of Education. Among the Bengalis, those want to be teachers are given training and appointed as teachers,” said the minister.
(population bengalis 96%)
According toanews release, the Foreign Affairs Ministry say it is reviewing incidents that occurred in Rakhine state and denied that the incidents of violence that erupted in 2012 had to do with religious persecution.
In order to prevent further clashes over 5000 police forces, 1200 from the border and immigration forces and Armed forces are cooperating to provide security.
Myanmar connection-Godfather of Heroin-lo hsing han_ဘိန်းဘုရင် လောစစ်ဟန် သေဆုံးသွားပါပြီ။
ဘိန်းဘုရင် လောစစ်ဟန် သေဆုံးသွားပါပြီ။
ဘိန်းဘုရင် လောစစ်ဟန် (Godfather of Heroin) ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကနေ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး မြန်မာအာဏာရှင်တွေ လက်ထဲကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအာဏာရှင်တွေက ဘိန်းဘုရင် လောစစ်ဟန်ကို သေဒဏ်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာ အကျဉ်းထောင်ကနေ လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘိန်းဘုရင် လောစစ်ဟန်ဟာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ သူရဲ့ သားဖြစ်သူ စတီဖန်လော (Stephen Law) နဲ့Asia World ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအာဏာရှင်တွေဟာ ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာ ဘိန်းဘုရင် လောစစ်ဟန်တို့ ကို နိုင်ငံတကာက မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုတွေနဲ့အလိုရှိနေတာတောင် အပ်နှံလွဲပြောင်းခြင်း မရှိဘဲ၊ တရားဝင်လက်ခံထားပြီး အယောင်ပြ ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ပြခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် ရရှိခဲ့တဲ့ ငွေမည်းတွေ ငွေဖြူဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအာဏာရှင်တွေရဲ့ဘယ်သူသေသေ ၄င်းတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ ရှေ့ တန်းတင်ကာ ဘိန်းဘုရင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသာ အလေးပေးပြီး၊ မြန်မာရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကြား မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ပျံ့ နှံ့ ရောက်ရှိမှာကို အလျဉ်းဂရုစိုက်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဖူး။
မြန်မာအာဏာရှင်တွေနဲ့ဘိန်းဘုရင်တွေ ပုလင်းတူ ဗူးဆို့ပေါင်းဖက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်လေးများ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပျက်ဆီးမှုတွေ များပြားစွာ ရှိနေတာမို့အမျိုးသားအရေး ထိခိုက်လျှက်ရှိတာ ကြာပါပြီ။ ဘိန်းဘုရင် လောစစ်ဟန် သေဆုံးသွားပေမယ့် သူ့ ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ကွင်းဆက်တွေနဲ့မြန်မာအာဏာရှင်တွေကတော့ ဆက်လက် အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေဆဲပါဘဲ။
Mogoke Sayadaw Warns Not Preach Hate Speech to Buddhist Monks in Rangoon-video
တရားဟော ဓမ္မကထိကများ အခြားဘာသာများကို မတိုက်ခိုက်ရန် မိုးကုတ်ဆရာတော် ညွှန်ကြားပြီ
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒေသနာတော်တွေကို ဟောကြားရာမှာ ဘယ်ဘာသာကိုမှ မထိခိုက်၊ မပုတ်ခတ်ဘဲ မူဘောင်အတွင်း ပြောဟောကြဖို့ မိုးကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ် နာယကဆရာတော်ကြီးတွေက မိုးကုတ်တရားဟော ဓမ္မကထိကတွေကို ဇူလိုင် ၁ဝရက်နေ့မှာ သီးသန့်သြဝါဒပေး မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။
International Sangha :Buddhist Peaceful Protest to protect Buddhagaya at United Nations in Thailand
International Sangha in Bangkok Peace Protest In Front Of Indian Embassy Bangkok Thailand Against Terrorist Attack On Buddhist .10.7.2013
Buddhist monks from over 11 countries from many Buddhist organizations gathered for the Buddhist Peaceful Protest to protect Buddhagaya at United Nations in Thailand on July 10, 2013.
Second mission of the day for our Lord Buddha: we move to Embassy of India to protest peacefully and present letter to the embassy after Buddhagaya was attacked. Our way is peace and harmony.
YANGON POLICE ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား(၂)ဦးအား တရားမ၀င် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်သူများအားအရေးယူမှု
On July 10, 2013 July 11, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား(၂)ဦးအား တရားမ၀င် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်သူများအားအရေးယူမှု
မာမတ်ဆူလတန်(ခ) တင်ဝင်း၊ မရွှေလုံးတို့ (၄)ဦးအား ၁၀.၇.၂၀၁၃ရက်နေ့၀၈၃၅အချိန် ပန်းဘဲတန်းမြို့မရဲစခန်း
ယင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားနှစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူး ကြီးဝင်းကြည်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၄င်းက “အခု ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ မသင်္ကာတဲ့လူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး နေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ဦးက ဖောက်ခွဲဖို့ အကြံအစည်နဲ့ ရောက်လာတာ ဟုတ်မဟုတ်၊ အခြားအကြံအစည်တွေ ရှိမရှိ၊ ဘာကြောင့် ရောက်လာတယ် ဆိုတာကိုတော့ စစ်ဆေးနေတုန်းပါပဲ” ဟု ဇူလိုင် ၉ ရက်၊ ည ၇ နာရီက ပြောကြားသည်။
တည်းခိုခဲ့သည့် ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ပိုလိုတည်းခိုခန်းမှ ညပိုင်းမန်နေဂျာဖြစ်သူ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဇူလိုင် ၉ ရက်၊ ည ၈ နာရီတွင် “သူတို့နှစ်ဦးက ဒီနေ့မနက်မှာပဲ လာပြီးတည်းတယ်။ မွန်းလွဲပိုင်းမှာပဲ ရဲတွေကလာပြီး ဖမ်းသွားတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်အပြင် ဆိုင်က မနက်ပိုင်းမန်နေဂျာ ကိုတင်မောင်မြင့်ကိုလည်း ခေါ်သွားပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ပိုလိုတည်းခိုခန်းမှ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအား မေးမြန်းရာ ၎င်းက “မနက်ပိုင်း မန်နေဂျာကတော့ ပတ်စ်ပို့ကို ကြည့်ပြီးတော့ တည်းခိုခွင့် ပေးလိုက်တာပါ။ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ လာတာလား၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ လာတာလား ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး” ဟု ပြောကြားသည်။
Bangladeshis arrested entering Myanmar as fake Buddhist monks
Myanmar’s police are questioning two Bangladeshi citizens who were arrested on Tuesday under suspicion of staying ataguesthouse in Yangon disguised as Buddhist monks, according toahigh-ranking police official.
Police arrested Parsujait Barua, aged 27 and Antar Barua, aged 29 while they were staying in at Polo Guesthouse in Pabedan Township disguised as Buddhist monks. They reportedly flew to Yangon from Dakar via Thailand and police are investigating whether they were planning destructive acts.
“It is true we have arrested and are questioning two suspects disguised as Buddhist monks. But we are still investigating whether they haveabomb plot or not,” said Police Lieutenant Colonel Win Kyi.
According to the police, the two suspects arrived in Yangon onaMyanmar Airways flight at 9.30am on Tuesday. They were contacted byaMuslim couple who were to arrange for their onward travel to Malaysia. The police are searching for the couple and have confiscated the materials, passports and mobile phones from the two suspects.
The night shift manager from the Polo Guesthouse, Aung Kyaw told Eleven Media that the two Bangladeshi’s checked into the hostel in the morning and were arrested the very same afternoon.
“They checked in at the guesthouse this morning. In the afternoon, they were arrested by police. Our morning shift manager Tin Maung Myint was also taken to be questioned by police.”
After contacting the guesthouse owner, he said they allowed the two Bangladeshis to stay there after checking their passports.
“I don’t know whether they came in yellow robes or civilian clothes,” he said.
The incident comes as the government tightens security around Myanmar’s main Buddhist sites including the famed Shwedagon Pagoda in central Yangon, followingaseries of bomb blasts on Sunday at Bodh Gaya in northern India, one of Buddhism’s holiest sites.